XOG CUSUB: Muqdisho iyo abu-dubai oo la damacsan yahay in la mataaneeyo | JIGJIGA.NET
XOG CUSUB: Muqdisho iyo abu-dubai oo la damacsan yahay in la mataaneeyo
Published on February 4, 2018 by admin · No Comments
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada muqdisho C/Raxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa safaaradda Imaaraadka ee ku taalla Muqdisho ku booqday danjiraha Imaaraadka ee Soomaaliya Maxamed Axmed Cismaan Al Xamadi.
Al-Xamadi iyo Yariisow ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal ,mideynta naqshadaha Muqdisho iyo Abu Dhabi iyo, iskaashiga labada dal.
C/Raxmaan Yariisow ayaa dowladda Imaaraadka uga mahad celiyay mashaarciida ay ka fuliso Soomaaliya,waxaana sidoo kale safiirku uu ka mahadceliyay booqashada duqa Muqdisho ee safaaradda Imaaraadka eek u taalla Muqdisho.
Sida ay qortay wakaaladda wararka Imaaraadka ee WAM,labada dhinac ayaa isla soo qaaday sidii dowladda Imaaraadka uga qeyb qaadan lahayd dhinacyada horumarinta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo mashaarciida kale ee dalka.
Danjire Al-Xmaadi ayaa kulanka ku ballan qaaday in dowladda Imaaraadka diyaar u tahay wada shaqeynta Muqdisho iyo Abu dhabai sidoo kalena ay ka wada shaqeynayaan nooc kasta oo horumarinta la xiriirta